Indlela yokupenda ifowuni yeplastiki?
Iifestile zeplastiki ezithandwayo namhlanje ziyaziwa ngokuthembeka nokuzinza. I-sill nayo inempahla efanayo, edla ngokuqhelekileyo ifakwe efestile. Nangona kunjalo, kubonakala kwimiba engathandekiyo: ilanga elikhanyayo, umswakama kwiintyatyambo zeentyatyambo, umoya ofudumeleyo ukusuka kuma-radiators. Kwaye ukuba iifestile yefestile yeplastiki ilahlekelwa yimbonakalo yayo yasekuqaleni, umnini-mhlaba kufuneka afumene ukuba ifowuni yefestile yefestile ingabonwa kwaye kulungele ukwenza njalo.
Iintlobo zepeyinti yeeplastiki zeplastiki
Iifestile yePlastiki ifowuni kufuneka ipeyinti, kodwa oku kufuneka ukhethe upende olukhethekileyo. Izambatho eziphambili zepende ezifanelekileyo zeplastiki zi:
ipeyinti yemoto yomgangatho weplastiki, ithengiswa kwiitena ze-aerosol. Esi sambatho asiyi kuba namandla, ngoko sisetyenziswe kwiindawo eziliqela. Kodwa, usebenzisa ipeyinti enjalo, unokukhetha iindidi ezahlukahlukeneyo, kwaye inkqubo yokuyisebenzisa iza kuba lula;
ipeyinti ye-polyurethane kunye nokudibanisa kanzima;
I-alkyd-urethane yepende yelinye yepende, njengaleyo yangaphambili, iya kuba namandla ngaphezu kwe-aerosol, kwaye iingubo ezifakwe ngeepayipi ezinjalo ziyakwazi ukumelana nemithwalo ebalulekileyo ngaphandle kokulahlekelwa yimbonakalo yemveliso.
Ngaphambi kokuba uqale ukudweba ifowuni yefestile yefestile, umgangatho wayo kufuneka ulungiswe. Ukuba ifowuni yeplastiki ifakwe ngaphambili, ke kuyimfuneko ukususa ipeyinti endala kunye nokuhluthwa okukhethekileyo. Emva koko, umgangatho kufuneka uxoxwe nge-sandpaper ngqolowa. Emva koko ihlanganiswe ngeplasmer yokuqala. Emva kwefestile yefestile isomile, kufuneka ixilwe kwakhona kunye ne-sandpaper enhle kakhulu. Ngomhlaba owomileyo, susa uthuli, uze uhlawule. Ngoku, vala ubuso kunye ne-scotch tape uze uqale ukudweba.
Ngaba ndinokubeka i-laminate kwi-linoleum?
Iipropati kwisitayela saseScandinavian - ukuzithiba kwezinto ezintle
Umgangatho obuninzi wokuziphakamisa
Ibhedi yomntwana ohambayo
Itheyibhile elandelekayo ye laptop
Idesktophu encinci yekhompyutha
Indlu yesikhubekiso esivinyiweyo-isisombululo esinokwenziwa kwikhaya lamanje
Ukufudumala kwee-attic endlwini yangasese
Inkukhu ye-Chicken kwi-sauce enomsila omuncu kwi-pan yokupanda
Pseudomonas aeruginosa - iimpawu
Ungacoca njani ama-mushroom?
Izindlela zempembelelo yengqondo
Kutheni umntwana ejikela entloko?
Iigugu - i-fashion spring-ehlobo 2014
Uhlobo lwesimboli "apple"
Ukunyamekela i-patch yeerberberries
Ingubo kunye ne-refrex ye-ureter - izizathu kunye nonyango lwezo zonke iintlobo zokugula
Umntwana uhlahlela - wenzeni?
Umngcongolo wesibeleko ngexesha lokukhulelwa
U-Pamela Anderson noSergey Ivanov
Upheka njani amaqanda ahlambulukileyo?
Ingxaki yesikhumba ebusweni - ubuso
Samsa kunye nenkukhu evela kwi-puff pastry
Kutheni kufuneka uhambe nomntwana wakho nsuku zonke?